WASIIR FARATOON WAA RUG CADAA SIYAASI OO SOMALILAND LEEDAHAY..W/Q YUUSUF CAWAD SHIINE | Burco Media
WASIIR FARATOON WAA RUG CADAA SIYAASI OO SOMALILAND LEEDAHAY..W/Q YUUSUF CAWAD SHIINE
Wasiirka arrimaha gudaha & amniga ee Somaliland Mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir waxa muddadii koobnayd ee uu hayey xilka wasaarada arrimaha gudaha Somaliland wax ka qabtay hawlihii ay wasaaraddu u qaabilsanayd qaranka isla markaana maamul daadejin iyo isku xidh ku sameeyey hawl­wadeennada wasaaradda iyo laamaha amniga. Sidoo kale waxaa uu xoojiyey shaqadii ay madaxda dhaqanku qaabilsanaayeen isaga oo isku xidh ku sameeyey nidaamkii ay cuqaasha iyo salaadiintu kaga qayb qaadanayeen adkaynta amniga.
Wasiir Faratoon waxaa uu sidoo kale u tafo xaytay isla markaana soo afjaray shaqaaqooyinkii dhawaan ka dhacay deegaannada bariga Somaliland gaar ahaanna kuwii shaydaanku ka dhex adeegay ee ay beellaha walaallaha ah ee deegaanka Ceel Afweyn ku dirireen, kuwaas oo haatan maraya meel aad u fiican.
Waxa kale oo uu wasiirku ku guulaystay in labadii beelood ee ku dagaalamay gobalka Sool oo dad badani ku dhinteen isku dhacaas uu gogol nabadeed u fidiyey labada beelood ee walaalaha ahaa oo uu heshiis wax ku oola dhex dhigay.
Waxa kale oo uu wasiirku hadh iyo habeenba dhexda u xidhan yahay sidii ay nabad waarta loogu wada noolaan lahaa deegaanada soomaliland siiba gobalada bari. Intaas kaga muu hadhin dagaalkii nabadeed ee gobalada bari wuxuu hadana gacanta ku hayaa iska hor imaad ka dhacay degmada Adhi cadeeye.
Burco Media.com marnaba masuul kama aha Aragtida dadka kale